IGoogle Earth yisoftware eye yatshintsha indlela esibona ngayo ihlabathi. Amava ejikelezileyo sphere xa, kodwa ngoluhlu olusondeleyo kuyo nayiphi na indawo yehlabathi, ngokungathi sasikhona. Yi le…
Uninzi lwethu luyasazi isixhobo sikaGoogle Earth, kwaye yiyo loo nto kule minyaka idlulileyo sibone ukuvela kwayo okunomdla, ukusinika izisombululo ezisebenzayo ngokuhambelana nenkqubela phambili yetekhnoloji. Esi sixhobo sisetyenziswa rhoqo...
I-Google Earth ibonelela ngokufikelela kwidatha yakho yokuphakama ngesitshixo sasimahla se-API ye-API. UYilo lweNdawo yoLuntu luthatha ithuba lobuchule ngokusebenza kwayo kweSathelayithi ukuya kuMphezulu. Lo msebenzi ikuvumela ukuba ukhethe indawo kunye nomgama phakathi...
[advanced_iframe src=”https://www.geofumadas.com/coordinates/” width=”100%” height=”600″] Inyathelo 1. Khuphela itemplate yokutya kwedatha. Nangona inqaku lijolise kulungelelwaniso lwe-UTM, isicelo sineetemplates kwisibanzi kunye nobude kunye needigri zedesimali, kunye nefomathi yedigri,…
Kuninzi lwabahlalutyi, abafuna ukwakha iimephu apho ireferensi ye-raster evela kuyo nayiphi na iqonga efana neGoogle, i-Bing okanye i-ArcGIS Imagery ibonisiwe, ngokuqinisekileyo asinayo ingxaki kuba phantse naliphi na iqonga linokufikelela kwezi nkonzo. Kodwa…
Imephu.XL sisicelo esikuvumela ukuba ufake imephu kwi-Excel kwaye ufumane ulungelelwaniso ngqo kwimephu. Ukongeza, ungabonisa uluhlu lobude kunye nobude kwimephu. Uyifaka njani imaphu kwi-Excel Kanye...
Ndinedatha kwiGoogle Earth, kwaye ndifuna ukubonisa ulungelelwaniso kwi-Excel. Njengoko ubona, yintsimi eneentsika ezisi-7 kunye nendlu eneentsika ezine. Gcina idatha kaGoogle Earth. Ukukhuphela le datha, yenza...
Inkampani i-Allware ltd isanda kukhulula iSakhelo seWebhu esibizwa ngokuba yi-eZhing (www.ezhing.com), onokuthi kumanyathelo ama-4 ube nemephu yakho yangasese kunye nezalathisi kunye ne-IoT (iSensors, IBeacons, Alarms, etc) zonke ngexesha langempela. 1.-Yenza uYilo lwakho (Iindawo, iZinto,...
Le fayile iqulethe iindawo ze-UTM kwifomathi ye-kmz. Wakuba ukhutshiwe kufuneka uyivule. Khuphela ifayile apha Khuphela ifayile apha Njengereferensi... ulungelelwaniso lwejografi luvela ekwahluleni iglowubhu ngokwezahlulo njenge...
Uguqulelo lweGoogle Earth Pro luyekile ukuhlawulwa ixesha elide elidlulileyo, apho kunokwenzeka ukuvula iifayile ezahlukeneyo zeGIS kunye neRaster ngqo kwisicelo. Siyaqonda ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokuthumela ifayile ye-SHP kwi…
Kumnandi ukwazi ukuba i-gvSIG ifumene ibhaso lamazwe ngamazwe ngexesha loCwangciso lwe-Europa lwakutsha nje. Eli bhaso libonelela ngethuba leeprojekthi ezinegalelo ekuyilweni kwezinto ezintsha kunye nezisombululo ezizinzileyo kuluntu lwehlabathi. Kanjalo,…
I-geomarketing vs. Ubumfihlo: Impembelelo yeGeolocation kumsebenzisi oqhelekileyo
Ukusukela oko yathi yaziswa kumzi mveliso wentengiso, i-geolocation iye yaba yinto esefashonini, ebonwa njengenye yezona zinto ziluncedo kwizixhobo eziphathwayo, xa kuthelekiswa neePC, ngokoluvo lwe…
I-GEarthView yiplagi ebalulekileyo evumela ukuba wenze umbono ohambelanayo we-Quantum GIS umboniso kuGoogle Earth. Uyifaka njani iplagi Ukuyifaka, khetha: Iiplagi> Lawula iiplagi kwaye uziphendle, njengoko kubonisiwe kwi...